TZXDuino: ZX स्पेक्ट्रम सफ्टवेयर को लागी एक क्यासेट मा एक Ardino बोर्ड नि: शुल्क हार्डवेयर
त्यहाँ धेरै छन् रेट्रो कम्प्यूटर मायालु प्रयोगकर्ताहरू। प्रामाणिक संग्रहकर्ताहरू जसले पुरानो पौराणिक उपकरणहरू किन्न वा पुनर्स्थापना गर्न व्यवस्थित गर्छन्। Zilog Z80 चिप्स, एप्पल क्लासिक, वा ती अन्य पौराणिक उपकरणहरू जुन ZX स्पेक्ट्रम, वा एम्स्ट्राड, अटारी, कमोडोर, र अधिकको बारेमा विगतमा थियो बारे उत्साहित। खैर, ती सबैलाई TZXDuino प्रोजेक्टको बारेमा थाहा हुनुपर्छ जुन हामी यस लेखमा कुरा गर्नेछौं।
अन्य पोष्टहरूमा हामीले रेट्रो भिडियो खेलहरू पुनःप्राप्त गर्न र तिनीहरूलाई चलाउन लेखहरू देखाउँदछौं नक्कली। यस पटक हामी त्यो के हो भनेर कुरा गर्नेछौं TZXDuino, यसले स्पेक्ट्रम र अर्डिनो इत्यादिसँग के गर्नुपर्दछ।
1 ZX स्पेक्ट्रम
2 TZXDuino के हो?
2.1 आफ्नै TZXDuino सिर्जना गर्न तपाईलाई आवाश्यक पर्नेछ
बेलायती फर्म सिन्क्लेयर अनुसन्धान सबैभन्दा प्रसिद्ध कम्प्युटरहरू मध्ये एक सिर्जना गरियो र त्यो विद्रोही प्रेमीहरूको लागि एक चमत्कार हो। यो ZX स्पेक्ट्रम हो कि अप्रिल २,, १ 23 1982२ मा बजारमा जान्छ।
8-बिट कम्प्युटर प्रसिद्ध माइक्रोप्रोसेसरहरूमा आधारित छ Zilog Z80A। थप रूपमा, यो युरोपको सबैभन्दा लोकप्रिय होम माइक्रो कम्प्युटरहरू मध्ये एक बन्ने छ।
एक अनुकूलित र धेरै कम्प्याक्ट उपकरण समय को लागी खुशी हुनेछ कम्प्युटर र भिडियो खेल प्रशंसकहरू यो दशकको, र जुन आज पनि एक संग्रहालय टुक्रा हो। वास्तवमा, तिनीहरू वास्तविक हार्डवेयरको लागि पर्याप्त भाग्यशाली छैनन्, क्लोनहरू वा इमुलेटर्सको साथ सामग्री छन् उनीहरूको सफ्टवेयर पुन: जीवित राख्न।
ZX स्पेक्ट्रम को केहि संस्करणहरु को लागी, धेरै संस्करणहरु हुनेछ क्लोनहरू र डेरिवेटिवहरू यो उत्पादनको सफलता दिएर देखा पर्‍यो जसका लागि त्यहाँ धेरै उपयुक्त कम्प्याटि operating प्रणालीहरू थिए।
यसको लागि मूल हार्डवेयर, सुविधाहरू समयको लागि एकदम विचारशील थिए:
CPU: Zilog Z80A 3.5. M मेगाहर्ट्जमा र data-बिट यसको डाटा बसको लागि र १ bus-बिट ठेगाना बसको लागि, अधिक मेमोरी प्रबन्ध गर्न सक्षम हुँदै।
मेमोरी- तपाईं दुई फरक RAM कन्फिगरेसन बीच छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। एक सस्तो १ k केबी संस्करण र अधिक महँगो k 16 केबी संस्करण। त्यो रोमको १ k केबीमा थपिनु पर्‍यो जुन यसलाई आधारको रूपमा समावेश गरिएको थियो। त्यो रोममा आधारभूत दोभाषे समावेश गर्दछ।
कीबोर्ड: रबर केहि संस्करणहरु मा कम्प्युटर मा एकीकृत।
भण्डारण: चुंबकीय क्यासेट टेप प्रणाली सामान्य अडियो प्रणालीमा प्रयोग गरिएको जस्तो छ। डेटा औसत १ 1500०० बिट / सेको वेगमा पहुँच गर्न सकिन्छ। त्यसकारण, लगभग k 48 केबीको एक भिडियो खेल लोड हुनको लागि लगभग min मिनेट लाग्यो। यद्यपि केहि खेलहरूले गति बढाउन टर्बो मोड प्रयोग गर्‍यो। थप रूपमा, स्पेक्ट्रम प्रक्षेपणको एक बर्ष पछि, सिन्क्लेयरले ZX इन्टरफेस I लाई जारी गर्‍यो, जसले १२०,००० बिट / सेकेन्डको गतिसँग माइक्रोड्राइभ भनिने fast वटा टेप ड्राइभहरू जडान गर्न सक्दछ।
ग्राफिक्स: यसको ग्राफिक्स प्रणालीले २256 × १ p २ px सम्मको म्याट्रिक्स ह्यान्डल गर्न सक्दछ। यद्यपि रंग resolution२ × २ was मात्र थियो, × × p पिक्सेल क्लस्टरहरू र रंग जानकारी वा पृष्ठभूमि रंग, मसी रंग, चमक र फ्ल्यास जस्ता सुविधाहरूसँग।
अवश्य पनि, धेरै परिधीय यो कम्प्युटरमा थप्न। केवल ZX माइक्रोड्राईभ मात्र हैन, तर अन्य डिस्क इन्टरफेसहरू जस्तै बीटा डिस्क, डिस्कपल, ओपस डिस्कवरी, अप्टिकल पेन, चूहों (केम्पस्टन माउस, स्टार माउस, एएमएक्स माउस,…), प्रिन्टरहरू, भिडियो गेम नियन्त्रकहरू जस्तै जॉयस्टिकहरू, आदि।
१ 1986 XNUMX मा, सिनक्लेयर रिसर्चले आफ्नो ब्रान्ड र उत्पादनहरू एम्स्ट्राडलाई बेचे, ऐतिहासिक ऐतिहासिकहरू मध्ये एक हो। तर, यदि तपाईंलाई थाहा छैन, सिन्क्लेयर रिसर्च लिमिटेड अझै पनि एक कम्पनीको रूपमा अवस्थित छ ...
र यो सबै एक सपना नामको सपनाको लागि सर क्लाइव सिन्क्लेयर, एक लन्डन आविष्कारक, ईन्जिनियर र व्यापारी जोसँग घरको लागि माइक्रो कंप्यूटर बेच्नको लागि यस उत्कृष्ट विचार थियो। र सब भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि तपाईं ती TZXDuino जस्तो परियोजनाहरूसँग मजा लिन जारी राख्न सक्नुहुन्छ जुन मैले तपाईंलाई तल देखाउँछु ...
TZXDuino के हो?
यो सत्य हो कि तपाईंसँग निपटानमा इमुलेटरहरू छन्, साथसाथै तपाईं स्पेक्ट्रम उपकरणहरू खरीद वा पुनर्स्थापना पनि गर्नुहुन्छ जुन तपाईं आफैले दोस्रो हातको बजारमा फेला पार्नुहुन्छ। त्यस तरीकाले तपाईसँग हार्डवेयर पहिलेको जस्तो रेट्रो भिडियो गेमहरू र सफ्टवेयर चलाउन सक्षम हुनेछ। तर सबैजनाले एउटा पाउँदैनन, र यो जहाँ छ TZXDuino यसको प्रासंगिकता मा लिन्छ।
ठिक छ, क्यासेट टेप जस्तै समान एउटा संलग्नकको कल्पना गर्नुहोस्, भित्र एउटा विकास बोर्डको साथ र मौलिक ZX स्पेक्ट्रम सफ्टवेयर चलाउन सक्षम छ जुन तपाईं एकमा भण्डार गर्नुभयो। माइक्रोएसडी कार्ड। त्यो तपाईसँग TZXDuino को रूपमा हुन्छ। यो वास्तविक हार्डवेयर भएको छैन, तर केहि यस्तो चीज हो यदि तपाईं इमुलेटरहरू मन पराउनुहुन्न भने ...
यस परियोजनाका लागि जिम्मेवारहरू हुन् एन्ड्र्यू बियर र दुनान एडवर्ड्स, जो भोली र कल्पनाको साथ सबै एक क्यासेट टेप भित्र राख्नु भयो। त्यसोभए स्पेक्ट्रमको लागि -०-80० को सबै ती पौराणिक कार्यक्रमहरूको पुनरुत्थान गर्न तपाईको हातमा एउटा सानो उपकरण हुन सक्छ।
यदि तपाइँ यसलाई कसरी सिर्जना गरिएको थियो भन्ने बारे प्राविधिक विवरणहरूको बारेमा सोच्नुहुन्छ भने, सत्य यो हो कि तिनीहरू भइसकेका छन् अर्डिनोमा आधारित। यसैले यसको नाम। र यदि तपाईं एक चाहानुहुन्छ र तपाईंसँग निर्माताको आत्मा छ भने, तपाईं सक्नुहुन्छ तपाईंको आफ्नै DIY क्यासेट सिर्जना गर्नुहोस्। यस लि In्कमा तपाईंले एक PDF प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन इलेक्ट्रोनिक घटकहरूको सम्बन्धीका लागि सबै निर्देशनहरू समावेश गर्दछ। र सत्य यो हो कि यो अत्यन्त जटिल र लामो प्रक्रिया होइन ...
केवल जटिल चीज यो छ कि यसलाई केहि कौशलको आवश्यक हुन्छ सबै चीजहरू भित्र एकीकृत गर्नका लागि जुन तपाईंसँग राम्रो छ टिन सोल्डरिंग कौशल.
जे भए पनि, म पक्का छु तपाइँ प्रक्रियाको दौरान धेरै सिक्नुहुन्छ निर्माण र रमाईलो एक पटक भेला हुने ग्यारेन्टी गरिनेछ ...
आफ्नै TZXDuino सिर्जना गर्न तपाईलाई आवाश्यक पर्नेछ
तपाईं सक्नुहुन्छ सबै कम्पोनेन्टहरू खरीद गर्नुहोस् विशेष स्टोरहरूमा वा अमेजनमा सजिलैसँग, जस्तै:
माइक्रोएसडी कार्ड रिडर मोड्युल
PAM8403 2X3W प्रवर्धक बोर्ड
लेखको पूर्ण मार्ग: नि: शुल्क हार्डवेयर » Arduino » TZXDuino: ZX स्पेक्ट्रम सफ्टवेयरको लागि क्यासेटमा एक Aruino बोर्ड
इलेक्ट्रिक मोटर: तपाईलाई थाहा पाउनु पर्ने सबै चीज
ASUS टिन्कर बोर्ड: तपाईलाई थाहा पाउनु पर्ने सबै कुरा